Madaxweynaha dalka oo baaq u diray dhinacyada ku dagaallamaya Itoobiya | Star FM
Home Wararka Kenya Madaxweynaha dalka oo baaq u diray dhinacyada ku dagaallamaya Itoobiya
Madaxweynaha dalka oo baaq u diray dhinacyada ku dagaallamaya Itoobiya
Hoggaamiyaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa ra’iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed iyo cid kasta oo wanaagga jecel ugu baaqay inay ku dadaasho sidii loo soo afjari lahaa colaadaha dalkaasi ka taagan.
Mr. Kenyatta ayaa soo jeediyay in dhinacyada dagaallamaya ay billaabaan wada hadallo looga gol-leeyahay xabad joojin dhaqan gasha.
Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in hubka la isku adeegsanaya lagu beddelo heshiis nabadeed.
Dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ayaa walaac ka muujisay xaaladda amni ee sii xumaanaysa ee wadanka Itoobiya iyadoo kenyaanka ugu baaqday feejignaan dheeraad ah.
Previous articleIn ka badan 11 qof oo ku dhimatay dhul go’ saameeyay Colombia
Next articleDowladda oo beenisay in maanta ay tahay fasax qaran